I-China Umshini oVuthayo kunye ne-Emulsification System yoMvelisi kunye noMthengisi | Qiangzhong
Itheyibhile ye-emulsification ye-single-layer
Isetyenziswa ngokubanzi kwimizi-mveliso yotywala, iiprudusi zobisi, isiselo, imichiza yemihla ngemihla, i-bio-pharmaceuticals, njl.
Hlanganisa, usasaze, wenze i-emulsify, i-homogenize, ezothutho, ibhetshi ……
Inkqubo ye-emulsification yenzelwe ukuveliswa kokumiswa kwe-emulsion kuluhlu olubanzi lwamashishini. Kukho iimodeli ezintlanu zokukhetha ukusuka ku-5L ukuya ku-1000L, kubandakanya uvavanyo, ubungakanani obuphakathi kunye nobukhulu.
Inkqubo ilula kuyilo kwaye kulula ukuyisebenzisa, kwaye umatshini wonke ugcina indawo ngakumbi kuyilo lobude. Izixhobo eziphambili zokuxuba ziqinisekisa umgangatho ofanayo wemveliso egqityiweyo. Iyaguquguquka kwaye inokusetyenziswa kwizinto ezahlukeneyo ezinje ngomshini, ukufudumeza ibhatyi / ukupholisa, iziciko ezivulekileyo ezininzi, uyilo lwesampulu, njl.njl. Yenza inkqubo ye-SP isixhobo esifanelekileyo sokulungisa ulwelo. Kuyinto bhetyebhetye kuyilo kwaye ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno kumashishini ezahlukeneyo. Ingasetyenziselwa kwimulsion kunye nakwimveliso yamachiza kwishishini lokuthambisa, kwimveliso yemayonnaise kunye ne-condiment kwishishini lokutya, kwimveliso yeemulsions, ukumiswa, i-pigment kunye nokuhonjiswa kwimizi-mveliso yamachiza, njl.
Ulwakhiwo kunye nokuSebenza koMsebenzi
Inkqubo yokujikeleza lwangaphandle homogenization sisiseko senkqubo. Idibanisa inhalation, uthutho, ukusasazeka, kunye nokucoca kwe-CIP kwi-Intanethi. Uyilo lwempompo yamanqanaba amabini luvumela inkqubo ye-homogenization yokubonelela kungekuphela ngamandla okuxuba imathiriyeli, kodwa kunye namandla okupompa amandla kunye nokukwazi ukuhambisa izinto ezibonakalayo ezibonakalayo. Ivumela isigaba samanzi kunye nenqanaba leoyile ukuba i-emulsified ngqo kwinkqubo ye-homogenization, emva koko yampompa kwi-reactor ukuze inyikime, ngaloo ndlela kuthintelwe iziphene ezibangelwa yinkqubo yesiqhelo.
Le yinkqubo efanelekileyo kakhulu edibanisa ukujikeleza okuphezulu, ukufana kwemveliso yamasuntswana ubukhulu kunye nokusebenza kakuhle kwe-emulsification. Izinto eziqinileyo kunye nolwelo zinokongezwa ngokuthe ngqo kwintloko ye-emulsification kwaye zikhawuleze kwaye zigqitywe ngokupheleleyo kwaye zisasazeke ukuthintela ukudibana. Kwinkqubo yokucoca i-CIP, le nkqubo inokusetyenziswa njengempompo yokudlulisa ukubonelela ngoxinzelelo oluphezulu lokucoca ulwelo lokujikeleza iibhola zokutshiza.
Isigaba sokumisa nokusasaza songezwa ngokuthe ngqo kwintloko esebenzayo.
Uyilo seemodyuli yentonga yokubopha ilungele ukugcinwa kunye nokudilizwa.
Ukujikeleza kwezinto ezibonakalayo, ukucoca i-CIP, akukho zimpompo zongezelelweyo ziyafuneka xa kukhutshwa.
Ukhetho lwasimahla lokuba loo mbandela uya kudlula kwigumbi le-emulsification.
Iziphumo ezingcono zokuqhubekeka, ixesha elifutshane lokuqhubekeka.
Inkqubo engundoqo ye-emulsification inokudityaniswa kunye ne-hoppers ezahlukeneyo, izixhobo zokuphelisa kwangaphambili kunye nokukhupha iitanki zesixhobo ngokuxhomekeke kwiimfuno zemveliso. Ngokwemathiriyeli, kunokufakwa izixhobo ezahlukeneyo zokufudumeza nokupholisa. Nokuba umgca wokujikeleza ungadlula ngokuthe ngqo kubushushu. Eyona ndlela isebenza kakuhle kukusukela kwethu rhoqo.
Le nkqubo yeyunithi yolawulo lwe-elektroniki inokuqwalaselwa ngolawulo lwamaqhosha alula okanye inkqubo ye-PLC yokuchukumisa isikrini kunye nolawulo lweresiphi, kuxhomekeke kukhetho loMthengi. Imatshini yesandla okanye yoomatshini abazenzekelayo iyafumaneka xa uceliwe.
Xa kuthelekiswa nohlobo olufanayo lwezixhobo phesheya, inkqubo yethu ezenzekelayo ayinako nje ukuhlangabezana neemfuno zomthengi (inokubonelela ngolingo lwenkqubo elula), kodwa ikwanazo neenzuzo ezinkulu ngokwexabiso, ixesha lokuhambisa kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa.
Egqithileyo Ipayipi engenasici
Okulandelayo: Isihluzi sebhegi enye
Ipompo eNtsha yoPhuculo lweMpompo yeSrh
Uchebe ke Emulsification Pump
Inqanaba elinye lempompo yeempompo Srh
Ipompo yokuQinisa iMpompo yeSrh
Inqanaba elitsha le-Emulsification Pump SRH
Inqanaba lesithathu leMpompo ye-Emulsification Pump SRH
Inqanaba elinye lempompo ye-Emulsification Pump SRH
Shear ephezulu impompo yokutsala emulsification